မွေးကင်းစလေးတွေ ညဘက် ဘာကြောင့်မအိပ်တာလဲ | Page3| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
မွေးကင်းစလေးတွေ ညဘက် ဘာကြောင့်မအိပ်တာလဲ
သုတေသန အတိအကျလုပ်ထားတာမျိုး မရှိပေမယ့် အမေဗိုက်ထဲမှာတည်းက ညဘက်တွေ ပိုပြီးလှုပ်တဲ့ကလေးဟာ မွေးပြီးရင်လည်း ညဘက် သိပ်မအိပ်တတ်ပါဘူး။ မွေးစကနေ တစ်လခွဲလောက်မှာ နာရီ ၂၀ လောက် အိပ်တတ်ပါတယ်။ အိပ်တာရယ်၊ နို့စို့တာရယ် ၂ မျိုးပဲရှိတာမို့ ခဏခဏ ထတတ်ပါတယ်။
၂ လလောက်ရောက်ရင်တော့ အိပ်တဲ့အချိန် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရှိလာပါတယ်။ ကလေးတွေ နေ့နဲ့ညမှားပြီး အိပ်တတ်တာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နေ့ခင်းဘက် မီးမှိတ်ထားတာ၊ လိုက်ကာတွေ ချထားတာမျိုးကလည်း ကလေးကို ပိုပြီးအိပ်ချင်စေတတ်ပါတယ်။
အိပ်နေရင်း အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုကြောင့် နိုးသွားခဲ့ရင် လူကြီးတွေလို သူ့ဘာသာ ပြန်အိပ်မပျော်ဘဲ လူကြီးတွေက ပြန်သိပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ၆ လလောက်အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ညဘက်မှာ လေထိုးလို့လည်း နိုးတတ်ပါတယ်။
● မိဘတွေလုပ်တတ်တဲ့ အမှားတွေကြောင့်
မိဘတွေက ကလေးကိုသိပ်ရင် နို့တိုက်တာ၊ ပုခက်လွှဲတာမျိုး လုပ်ပေးတဲ့အခါ ကလေးက အဲလိုလုပ်ပေးမှ အိပ်တတ်ပါတော့တယ်။ ၆ လ၊ ၇ လလောက်အထိက ဘာပြဿနာမရှိပေမယ့် ၈ လ၊ ၉ လလောက် ရောက်ပြီဆိုရင် တရေးနိုးတဲ့အခါတိုင်း သူ့ဘာသာသူ ပြန်အိပ်တတ်ရပါတော့မယ်။
● ချောင်းဆိုး၊ အအေးမိ၊ ဗိုက်နာတာကြောင့်
● ပူလွန်း၊ အေးလွန်းတာကြောင့်
● ချိုလိမ်၊ နို့ဘူးစို့တတ်တဲ့အကျင့်ကြောင့်
တချို့ကလေးတွေက မွေးကင်းစမှာထဲက နို့စို့ရင်း၊ နို့ဘူးသောက်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတတ်တာကြောင့် အကျင့်ဖြစ်နေပြီး ပါးစပ်ကနေ ပြုတ်သွားတိုင်း နိုးလာတတ်ပါတယ်။
>> မိဘတွေက ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲ?
● ၈ လ၊ ၉ လလောက် ရောက်ပြီဆိုရင် အိပ်တာကို အလေ့အကျင့် လုပ်ပေးရပါမယ်။
● ကလေးရဲ့သေးခံ (diaper) ကို ကြည့်ပေးဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။ ရှူးပေါက်၊ ဝမ်းသွားထားရင် နေရတာ အဆင်မပြေဖြစ်နေပြီး နိုးနေတတ်ပါတယ်။
သုေတသန အတိအက်လုပ္ထားတာမ်ိဳး မရွိေပမယ့္ အေမဗိုက္ထဲမွာတည္းက ညဘက္ေတြ ပိုၿပီးလႈပ္တဲ့ကေလးဟာ ေမြးၿပီးရင္လည္း ညဘက္ သိပ္မအိပ္တတ္ပါဘူး။ ေမြးစကေန တစ္လခြဲေလာက္မွာ နာရီ ၂၀ ေလာက္ အိပ္တတ္ပါတယ္။ အိပ္တာရယ္၊ ႏို႔စို႔တာရယ္ ၂ မ်ိဳးပဲရွိတာမို႔ ခဏခဏ ထတတ္ပါတယ္။
၂ လေလာက္ေရာက္ရင္ေတာ့ အိပ္တဲ့အခ်ိန္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရွိလာပါတယ္။ ကေလးေတြ ေန႔နဲ႔ညမွားၿပီး အိပ္တတ္တာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေန႔ခင္းဘက္ မီးမွိတ္ထားတာ၊ လိုက္ကာေတြ ခ်ထားတာမ်ိဳးကလည္း ကေလးကို ပိုၿပီးအိပ္ခ်င္ေစတတ္ပါတယ္။
အိပ္ေနရင္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ႏိုးသြားခဲ့ရင္ လူႀကီးေတြလို သူ႔ဘာသာ ျပန္အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ လူႀကီးေတြက ျပန္သိပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ၆ လေလာက္အထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ညဘက္မွာ ေလထိုးလို႔လည္း ႏိုးတတ္ပါတယ္။
● မိဘေတြလုပ္တတ္တဲ့ အမွားေတြေၾကာင့္
မိဘေတြက ကေလးကိုသိပ္ရင္ ႏို႔တိုက္တာ၊ ပုခက္လႊဲတာမ်ိဳး လုပ္ေပးတဲ့အခါ ကေလးက အဲလိုလုပ္ေပးမွ အိပ္တတ္ပါေတာ့တယ္။ ၆ လ၊ ၇ လေလာက္အထိက ဘာျပႆနာမရွိေပမယ့္ ၈ လ၊ ၉ လေလာက္ ေရာက္ၿပီဆိုရင္ တေရးႏိုးတဲ့အခါတိုင္း သူ႔ဘာသာသူ ျပန္အိပ္တတ္ရပါေတာ့မယ္။
● ေခ်ာင္းဆိုး၊ အေအးမိ၊ ဗိုက္နာတာေၾကာင့္
● ပူလြန္း၊ ေအးလြန္းတာေၾကာင့္
● ခ်ိဳလိမ္၊ ႏို႔ဘူးစို႔တတ္တဲ့အက်င့္ေၾကာင့္
တခ်ိဳ႕ကေလးေတြက ေမြးကင္းစမွာထဲက ႏို႔စို႔ရင္း၊ ႏို႔ဘူးေသာက္ရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္တာေၾကာင့္ အက်င့္ျဖစ္ေနၿပီး ပါးစပ္ကေန ျပဳတ္သြားတိုင္း ႏိုးလာတတ္ပါတယ္။
>> မိဘေတြက ဘာေတြလုပ္ေပးရမလဲ?
● ၈ လ၊ ၉ လေလာက္ ေရာက္ၿပီဆိုရင္ အိပ္တာကို အေလ့အက်င့္ လုပ္ေပးရပါမယ္။
● ကေလးရဲ႕ေသးခံ (diaper) ကို ၾကည့္ေပးဖို႔လည္း မေမ့ပါနဲ႔။ ႐ွဴးေပါက္၊ ဝမ္းသြားထားရင္ ေနရတာ အဆင္မေျပျဖစ္ေနၿပီး ႏိုးေနတတ္ပါတယ္။
သံဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေစားပေးဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ
၁၉.၁ဝ.၂ဝ၂၁ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
အာဟာရချို့တဲ့မှုတွေထဲမှာ သံဓာတ်ချို့တဲ့တာဟာ အဖြစ်အများဆုံးပါ။ ကလေးတွေဟာ သံဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို လုံလုံလောက်လောက် မစားဘူးဆိုရင် သံဓာတ်ချို့တဲ့နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ သံဓာတ်ချို့တဲ့ခဲ့ရင် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးပြီး သွေးအားနည်းရောဂါ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေ ပိုမိုထက်မြက်လာစေရန် မေမေတို့ လုပ်ဆောင်ပေးသင့်တဲ့နည်းလမ်းများ
၁၈.၁ဝ.၂ဝ၂၁ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
မိမိတို့ရဲ့ကလေးတွေကို ပိုမိုထက်မြက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျောင်းစာတွေချည်း အတင်းမလုပ်ခိုင်းပါနဲ့နော်။ ကလေးတွေဆိုတာ တစ်ချိန်လုံး စာမှစာဖြစ်နေသင့်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အိပ်ချိန်၊ စားချိန် ပုံမှန်ရှိသင့်သလို အပန်းဖြေချိန်လည်း ပုံမှန်ရှိသင့်ပါတယ်။
ဒါမှလည်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သူလေးတွေ ဖြစ...